Taliyaha Maleeshiyada Qeybdiid oo dhacay Baabuur Ganacsato Ceyr .
Taliyaha Maleeshiyada Qeybdiid oo dhacay Baabuur Ganacsato Ceyr . 15 May 2013 Waagacusub.com-Taliyaha Maleeshiyadda Cabdi Qeybdiid ayaa duleedka Magaalada Galkacyo ka dhacay sedex Baabuur oo dhuxul u siday Ganacsato u dhalatay beesha Ceyr Habargidir. Sarkaalka Baabuurta dhacay oo lagu magacaabo Mohamed Nur Cali Gadaar ayaa Odayaasha Galmudug State u sheegay inuu Baabuurta leexsaday kadib markii uu amar ka helay nin uu magaciisa ku sheegay Korneyl Cabdi Jamac Xabeeb.
Korneyl Cabdi Jamac Xabeeb ayaa la sheegay inuu yahay ninka afduubyada iyo xiriirka burcad badeeda u qaabilsan hogaamiye kooxeedka Cabdi Qeybdiid.
Maleeshiyadda qeybdiid waxay Gobolka Mudug ka wadaan Dilal,Dhac iyo falal lagu wiiqayo amaanka Galmudug State,waxaana dacwad ka dhana loo gudbiyay golaha amaanka iyo Maxkamadda Dimbiyada dagaalka ee Haag.
Maamulka Galmudug State ayaa cambaareeyay Baabuurta uu dhacay taliyaha Maleeshiyaadka Qeybdiid.